Kooxaha Manchester United,Tottenham,Liverpool,Stoke,Everton iyo Sunderland oo Guulo Gaaray “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Manchester United,Tottenham,Liverpool,Stoke,Everton iyo Sunderland oo Guulo Gaaray “SAWIRRO”
Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford 3-1 uga badisay kooxda Leicester City.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 27-aad u dhaliyay ciyaaryahan Robin van Persie.
Ciyaaryahan Radamel Falcao ayaa daqiiqadii 32-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Wes Morgan ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta goolka sedaxaad ka dhaliyay kooxdiisa Leicester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Marcin Wasilewski ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka kaliya u dhaliyay kooxda Leicester City.
Kooxda Manchester United ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 43-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa waxaa garoonkeeda the Hawthorns 0-3 uga badiyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii todobaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Christian Eriksen.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa daqiiqadii 15-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Tottenham,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Harry Kane ayaa daqiiqadii 64-aad ee ciyaarta gool sedaxaad oo rigoore ahaa u dhaliyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uag jirto kaalinta shanaad,waxana ay leedahay 40-dhibcood,halka kooxda West Bromwich Albion ay horyaalka uga jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 22-dhibcood.
Kooxda Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield 2-0 uga badisay kooxda West Ham United.
Kooxda Liverpool ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta gool dhalisay,waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling.
Ciyaaryahan Daniel Sturridge oo ka soo laabtay dhawaac uu ku maqnaa mudo shan bilood ah ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 38-dhibcood,halka kooxda West Ham ay horyaalka uga jirto kaalinta sideedaad,iyadoo leh 36-dhibcood.
Kooxda Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium 3-1 uga badisay kooxda Queens Park Rangers.
Kooxda Stoke City ayaa waxaa qeybtii hore ee ciyaarta labo gool u dhaliyay ciyaaryahan Jonathan Walters.
Ciyaaryahan Niko Kranjcar ayaa dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Queens Park Rangers,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jonathan Walters ayaa dhamaadkii qeybtii danbe ee ciyaarta goolka sedaxaad hat-trick u dhaliyay kooxda Stoke City.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto sagaalaad,waxana ay leedahay 32-dhibcood,halka kooxda Queens Park Rangers ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Crystal Palace ayaa waxaa garoonkeeda Selhurst Park 0-1 uga badiyay kooxda Everton.
Kooxda Everton ayaa daqiiqadii labaad ee ciyaarta gool ay ku badiyeen waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Romelu Lukaku.
Kooxda Everton ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 12-aad,waxana ay leedahay 26-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda Sunderland ayaa garoonkeeda Stadium Of Light 2-0 uga badisay kooxda Burnley.
Kooxda Sunderland ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 20-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Connor Wickham.
Ciyaaryahan Jermain Defoe oo dib ugu soo laabtay horyaalka ingiriiska ayaa goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay kooxda Sunderland,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Sunderland ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 14-aad,waxana ay leedahay 23-dhibcood,halka kooxda Burnley ay horyaalka uga jirto kaalinta 17-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Real Madrid oo Ka Adkaatay Kooxda Real Sociedad “SAWIRRO”